ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : (66) BROMANCE
BROMANCE IS THE PLATONIC RELATIONSHIP BETWEEN TWO STRAIGHT MALE.
အရှေ့ တောင်အာရှဘက်မှာကြည့်ပါ။ ယောကျာင်္းလေးများ အချင်းချင်းရင်းနှီးခင်မင်မှု၊ အကြောင်းလေ့လာကြည့်ရင်။ မိသားစုထက် ပိုခင်တဲ့FRIENDSHIP တော်တော်များများကို တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ တွေဟာ GAY တွေမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ညီအကိုရင်းထက်ပို ပြီးရင်းနှီးတာမျိုးကို BROMANCE လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အာရှ သားတွေ တစ်ယောက်ပုခုံး တစ်ယောက်ဖက် သွားတိုင်း GAY လို့ ယူဆရင်လုံးဝမှားပါလိမ့်မယ်။
WIVES COMPLAINT ABOUT BROMANCE OF THEIR PARTNER
MOST OF THE WIVES ARE DISAPPOINTED THIS RELATIONSHIP. BECAUSE THEIR HUSBANDS GIVE A LOTS OF TIME RATHER THAN THE FAMILY.
ဥပမာ။ မိသားစု PICNIC မှာ သူငယ်ချင်းကိုခေါ်လာခြင်း၊ HOLIDAY ခရီးအထွက်မှာ သူငယ်ချင်းကို အပါခေါ်ခဲ့ခြင်း။
HOW DO YOU KNOW THE TWO MALE ARE IN BROMANCE?
ဆံပင်ညှုပ်ဆိုင် တွင်ပုံစံတူ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း
GOOD ACCOMPANY ဖြစ်ခြင်း၊
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးကြခြင်း၊ အကြံဥာဏ် ရယူခြင်း (ABOUT EVERYTHING)
SPOUSE ထက် FRIEND အတွေးအခေါ်များကို ပိုလက်ခံခြင်း APPRECIATE ဖြစ်ခြင်း
SPARE TIME တွင်ဆုံ ကာ ရောက်တတ်ရာရာ အချိန်ဖြုန်းခြင်း
အသေးအမွှားကိစ္စများတွင် ဖုန်းခေါ်ကာတိုင်ပင်ခြင်း (ကားပြင်တာ၊ GYM သွားတာ၊ အရောင်ရွေးချယ်တာ)
HOW DO WOMEN DEAL WITH IT?
- FIND GIRL FRIEND FOR THEIR HUBBY FRIEND( SO THEY CAN NOT BOTHER TO TIME FROM THEIR HUBBY)
သင်ကော သင့် ရဲ့PARTNER ဟာ တခြားMALE FRIEND တစ်ယောက်နဲ့BROMANCE RELATIONSHIP ဖြစ်ရင် လက်ခံမှာလား။ သို့ မဟုတ် အထက်ကအတိုင်း ဖြေရှင်းမှာလား။? .................
Posted by ရိုးရိုး at Thursday, September 03, 2009